Ukoyika bethu abantwana
Ukwesaba kwethu kobuntwana okanye ukwesaba kuyisimo esingathandekiyo nesingenakukhathazeka ngathi, esinokubonakaliswa ngengozi engacacileyo okanye ingozi esondeleyo. Enyanisweni, ezo ntswelo kunye nezoyika ezivela kwiingqondo zethu zinokuba yiyinyaniso, kodwa kaninzi abaxhomekeke kwaye banokugxininiswa kwi-subconscious.
Abantwana bethu ukwesaba kukuba, ngokusisisiseko, isiqhamo sefantasy esoyika ngumntu okanye into yomntwana. Ngokuqhelekileyo, akubalulekanga ukuba kuchaza njani ukwesaba kwabantwana. Kubalulekile ukuba ukwesaba kwabantwana bethu akudingeki, kuba ngamanye amaxesha benza ubomi bethu bubekezeleleke kwaye bubuthathaka. Mhlawumbi inkulu kakhulu ukukhathazeka kwabantwana bethu ukungaqondakali nokungabikho kokuxhamla kunye nenyaniso. Uloyiko luncedo ngokwenene, kuba akuyinto engeyonto into yokuba uluntu lusivuza ngalo mvakalelo. Ngaphambili, xa umntu ehlala kwindawo yendalo, wayehlala emsindisa ekufeni okuthile.
Makhe sibone oko bethu abantwana abesabayo badibanise nabo, okusoloko kubeka indawo yethu yentlalo kunye nenkqubela yezobuchwepheshe bethu yobudala obuphambeneyo.
Ngokuqhelekileyo ukwesaba abantwana bethu kuvela kwiimeko ezahlukeneyo. Umzekelo, isandi esibukhali nesomeleleyo, ukubonakala ngokukhawuleza komfokazi phambi kwamehlo ethu, isandi samanzi kwipayipi kwigumbi, i-vacuum cleaner. Olu luhlu lunokuqhubeka luhlala ngonaphakade, ekubeni imfesane yobuntwana ingenamkhawulo. Ngako oko, ukwesaba abantwana bethu kungaba yinto ebalulekileyo.
Kwenzeka ukuba ebuntwaneni thina, sinoyiko lobumnyama kunye nezithunzi ezifihlakeleyo ezivela ekukhanyeni okungavamile, xa sikhulile, singazixeli, sinoyiko lokuba sisodwa. Ukongezelela, kwenzeka ukuba thina, soyika ebuntwaneni, siqala ukwesaba iimpukane, i-clowns, izilwanyana ezilahlekileyo, izazinyo zamazinyo, isohlwayo ngenxa yephutha elincinci njalo njalo. Kunokwenzeka ukubala ezininzi ezininzi izinto ezingenabungozi emehlweni omntu omdala onokuyikrakra ngengqondo yomntwana, okubangela ukwesaba kobuntwaneni bethu kubomi abadala.
Inkoliso yobomi bethu bobuntwaneni, kubonakala ixesha elifutshane ebuntwaneni, linyamalale ngaphandle kokulandelelana, kodwa ngamanye amaxesha kwenzeka ukuba ukutshatyalaliswa okugqithiseleyo ebuntwaneni kubakho ekudala xa sigwetyelwa yihlabathi eliyinyaniso, kwaye ingqondo engqondweni, iguqula kuyo, ifuna umkhiqizo ngaphandle. Xa sizifihla abantwana bethu, ngoko ke, sivelisa ingcamango engcono kulabo abasondezayo kunokuba umntu oyika ukhenketho wamazinyo.
Ukunciphisa ukwesaba kwabo ebuntwaneni, siqala ukubandakanya ukusikisela ngokuzenzekelayo ukuba akukho ngozi. Ngaloo ndlela sizama ukubonakalisa ukungalunganga kwekhosi yokucinga ngokukhumbuza iinkumbulo ezivela ebuntwaneni bobomi. Kodwa eqinisweni kungumntu okhulile kwaye uzama ukuzikhohlisa. Njengoko ubomi bubonisa, le ndlela yokusikisela ngokuzenzekelayo, kwaye ukwesaba kwethu kobuntwana kuphelelwa emlandweni, ukunikezela kwindlela yokudala yabantu. Ngoko, sizikhuthazela ukuba sifuna, umzekelo, inja elahlekileyo, ngokwenene siqala ukufumana ubuncinane besaba besilwanyana. Nangona kunjalo, ingcambu yethu kwinja yokwesaba ikhula ukusuka ebuntwaneni. Mhlawumbi, njengomntwana, ukwesaba ngokukhwaza inja, kwaye ngoku uqala kwaye uzame ukuphepha izinja.
Into ebaluleke kakhulu kukuba kukuba sesaba ngakumbi into, ngakumbi ukuqonda kwethu kuqala ukuzisa abantwana bethu ukwesaba kwi-consciousness. Kufana nokuphendulwa kwamakhankethi, okuqhubekayo okukhula. Ngesinye isihlandlo, ukutshatyalaliswa koyiko lwezinja zobuntwaneni bethu, sinokufumana emva kwexesha elithile ukuba saqala ukwesaba ezinye izinto ezazibukwe phambi kokuthula. Oku kusebenza kuwe.
Khawucinge nje ngomntwana kwaye ungazami ukunqanda ukwesaba abantwana, kodwa jonga ngeenyawo ezivulekileyo, ezikhokelela kwingxoxo yencoko ukulungisa ingxabano. Masibuyele kumzekelo ofanayo kunye nenja. Khangela inja engenamakhaya, cinga indlela ahlala ngayo kwisitalato. Phunyezwa ngemfesane, kwaye ke, endaweni yokwesaba umntwana kuya kuza kwintliziyo entsha-inceba, nangemva kwothando lwakhe lokuphulukisa. Ngokukhawuleza uza kukwazi ukudlula ngaphandle kokwesaba ukudlula inja. Ingundoqo ekuqondeni ukwesaba kwethu kobuntwana ayikho kwizinto eziphathekayo kunye neenyaniso, esiyikwesabayo size sizame ukuziphepha, kodwa ngezizathu ezisishukumisela ukuba sikwenze.
Ungafundi ukulwa noyiko lomntwana, kodwa ufunde indlela yokuhlalutya. Emva koko unokulibala ngonaphakade. Ubulumko buya kuqala ukubhalela abantwana bethu ukwesaba kwindlela entsha yokuthanda nokuqonda ukuba ayinyani, kodwa yinto engqondweni yomntwana kuphela.
Ukuphulukisa umculo kubantwana
Fundisa umntwana ukuba acinge
Imfundo yezemvelo yabantwana abanesifo sokungabikho
Ukuphuhliswa komntwana ukusuka komnye ukuya kwiminyaka emibini
Kwakhona, i-slobber ye-koryabed, kwakhona kwixesha elidala
Ubuhle ngesiNtaliyane: umlomo omtsha "uSophia Loren No. 1" waseDolce & Gabbana
Ukukhathala kweenyawo ukuhamba: unyango lwabantu
Isiphumo sabasetyhini abangashadile
Iimbono ezimbalwa zomhla wokuthandana
Indlela yokugcina idayari kwincwadi yencwadi?
Inkomo kwi-mustard-honey marinade